October | 2010 | Myanmar Mp3 Album
၁။ ဒိသာဖရဏမေတ္တာပွားပုံ-စိုးစန္ဒာထွန်းနှင့်ဝတ်အဖွဲ့ ၂။ အစိန္တေယျ-စိုးစန္ဒာထွန်း ၃။ လင်းရောင်ခြည်ဦး-စိုးစန္ဒာထွန်း ၄။ အောင်သမ္ဗုဒ္ဓေ-ရာဇာဝင်းတင့် ၅။ အန္တရာယ်ကင်း-စိုးစန္ဒာထွန်း ၆။ အောင်စေ၊ပိုင်စေ-စိုးစန္ဒာထွန်း ၇။ အနန္တငါးပါးကန်တော့ခန်း-စိုးစန္ဒာထွန်း ၈။ အောင်နိမိတ်-စိုးစန္ဒာထွန်း ၉။ ကြည်နူးဖွယ်-စိုးစန္ဒာထွန်း ၁၀။ သမ္ဗုဒ္ဓေ-စိုးစန္ဒာထွန်း ၁၁။ မေတ္တာဂုဏ်-စိုးစန္ဒာထွန်း ၁၂။ သုမေဓါရသေ့-စိုးစန္ဒာထွန်း ၁၃။ မေတ္တာသုတ်တော်လာမေတ္တာ(၁၁)ပွားနည်း-စိုးစန္ဒာထွန်း ၁၄။ သမ္ဗုဒ္ဓေတန်ခိုး-ရာဇာဝင်းတင့်၊စိုးစန္ဒာထွန်း Credit = ဓမ္မရံသီစာမျက်နှာဓမ္မတေး
October 31, 2010 Yee Wai Aung အဆိုတော် (မ) အခွေ (တကိုယ်တော်) စိုးစန္ဒာထွန်3းComments
ဟေမာနေ၀င်း – အောင်ခြင်းရှစ်ပါးဗုဒ္ဓတေးများ
၁။ အစိန္တေယျ ၂။ အောင်ခြင်းရှစ်ပါး ၃။ ဂုဏ်တော်ကိုးပါး ၄။ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး ၅။ မေတ္တာဂုဏ်ရည် ၆။ ငါးပါးပဉ္စသီ ၇။ ရှင်သီဝလိ ၈။ သမ္ဗုဒ္ဓေ ၉။ ရောင်ခြည်တော်ဖွင့် Credit = ဓမ္မရံသီစာမျက်နှာဓမ္မတေး
October 31, 2010 Yee Wai Aung အဆိုတော် (မ) အခွေ (တကိုယ်တော်) ဟေမာနေ၀င်3းComments
၁။ ဗုဒ္ဓနေ့ ၂။ မဟာသမယနေ့ ၃။ ဓမ္မစကြာနေ့ ၄။ မေတ္တာအခါတော်နေ့ ၅။ ဂရုဓမ္မအခါတော်နေ့ ၆။ အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ ၇။ သာမညဖလအခါတော်နေ့ ၈။ ရှင်တစ်ထောင်နေ့ ၉။ သြ၀ါဒပါတိမောက်အခါတော်နေ့ ၁၀။ ပြည်တော်ပြန်အခါတော်နေ့ Credit = ဓမ္မရံသီစာမျက်နှာဓမ္မတေး
October 31, 2010 Yee Wai Aung အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) ရီရီသန့် Leaveacomment
၁။ သီလာမြေယံ ၂။ ဗောဓိပင်နှင့်ရွှေပလင် ၃။ မင်္ဂလာ(၁၂)ပါး ၄။ နီးအောင်ပင်လှမ်း ၅။ သိကြားသာသနာ ၆။ ဗောဓိရွှေကျောင်း ၇။ မဟာဒုတ် ၈။ မိဘမေတ္တာ ၉။ ရှင်သီဝလိ ၁၀။ ဂုဏ်တော်အဖွင့် Credit = ဓမ္မရံသီစာမျက်နှာဓမ္မတေး
October 31, 2010 Yee Wai Aung အခွေ (တကိုယ်တော်) မာမာအေး Leaveacomment
Bryan Adams – Summer Of ’69 and Some Of His Songs
The concert video was Live in Budokan ……. DL
October 31, 2010 DsS Bryan Adams International Artist MTV 1 Comment
titile-de moe thae htae , download mediafire . I hope you will like this!
October 31, 2010 wiszer ၀ါသနာရှင် အခွေများ 1 Comment
Click Me Special Credits to mars
October 30, 2010 လူသား Coldplay International Artist Leaveacomment
Billboard Top 40 Radio Songs 21 Aug 2010
October 30, 2010 လူသား International Artist Leaveacomment